नेकपाका दर्जन नेताको चीनतिर लर्काे
काठमाडौं, २९ असोज । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको निमन्त्रणामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका दर्जन नेता चीनतिर लागेका छन्। नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच कार्यकर्ता तहमा अध्ययन
नेकपा सचिवालय बैठक सम्पन्न, संगठन विभागमा शाक्य, ढकाल र अधिकारी थपिए
काठमाडौं, २९ असोज । प्रमुख सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकले पार्टीको संगठन विभागमा अष्टलक्ष्मी
नेकपाका नेताहरु चीन प्रस्थान, उद्देश्य यस्तो छ
काठमाडौं, २७ असोज । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरु देवेन्द्र पौडेल, वेदुराम भुषाल र ईश्वरी रिजाल चीन प्रस्थान गरेका छन् । चीनको नीति, उद्देश्य र भूमिकाका बारे
नेकपा सचिवालय बैठक भोलि, सभामुख को बन्छ ?
काठमाडौं, २७ असोज । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक भोलि अपरान्ह बस्ने भएको छ । आज विहान भएको अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीचको
काठमाडौँ, २६ असोज : नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले दुई देशबीच सरकार, जनता र कम्युनिष्ट पार्टी तहमा राजनीतिक सम्बन्धको दायरा र आयामलाई विस्तार गर्न नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी
नेकपाका नेताहरुलाई चिनियाँ राष्ट्रपतिले के सन्देश दिए ?
काठमाडौं, २६ असोज । नेपालको दुई दिने राजकीय भ्रमणमा रहेका चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनफिङ र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरुबीचको भेटवार्तामा सीले नेपालले जुन राजनीतिक उपलब्धी र
काठमाडौँ, २६ असोज : नेपालको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएका चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सहित सचिवालयका सदस्यहरुले शिष्टाचार भेट गरेका